Mee fatịlaịza nke gị n'ụlọ
Mgbe fatịlaịza a na-eme n'ụlọ, ọ bụ ihe dị mkpa iji mebie ahịhịa.
Posttụkọta ala bụ ụzọ dị irè na mkpofu ahihia nke mkpofu anụ ụlọ
E nwere ụdị ikpo ukwu atọ: kwụ ọtọ, ọkara olulu, na olulu
Dị kwụ ọtọ
Adabara elu okpomọkụ, mmiri ozuzo, elu iru mmiri, elu mmiri table ebe. Họrọ ebe kpọrọ nkụ, mepere emepe, ma dịrị nso na mmiri. A na-ejikwa ogologo nke 2m dị elu 1.5-2m n'ogologo jikwaa oke nke ngwaọrụ. Ike ala tupu stacking na-ekpuchi ọ bụla oyi akwa nke ihe na a oyi akwa nke ahịhịa ma ọ bụ turf ka banye seepage ihe ọ juiceụ juiceụ .. Onye ọ bụla oyi akwa bụ 15-24cm oké. Gbakwunye mmiri kwesịrị ekwesị, wayo, sludge, feces, wdg. n'etiti etiti iji belata evaporation na amonia volaculation. Mgbe otu ọnwa nke ịkọkọchara ala, na-eburu onye na-agagharị agagharị iji tụgharịa compost ma na-atụgharị ikpo mgbe niile ruo mgbe ihe ahụ mechara mebie. A chọrọ ezigbo mmiri mmiri dabere na iru mmiri ma ọ bụ nkụ nke ala. Onu ogugu ndi compost na adi iche na oge, dika otutu ọnwa 3-4 na mb nke ọnwa 2 rue onwa 3-4 na udu oyi. .
Ọkara olulu ụdị
A na-ejikarị ya eme ihe n'oge mbido mmiri na udu mmiri. Họta ebe dị ala iji gwuo olulu miri emi 2-3-ụkwụ nke dị 5-6 n’ogologo na ụkwụ 8-12. Ekwesịrị ịtọba oghere ikuku na ala na mgbidi nke olulu ahụ. Tinye 1000 n'arọ nke ahịhịa ọka kpọrọ nkụ n'elu compost ma mechie ya na ala. Mgbe otu izu nke composting gasịrị, ọnọdụ okpomọkụ na-ebili. N'iji mpempe akwụkwọ, gbanye ihe na-eme ka ọ gbaa ụka ruo ụbọchị 5-7 mgbe obi jụrụ ya, ma gaa n'ihu na-eme compost ruo mgbe akụrụngwa kpamkpam.
Ohaneze 2 mita miri, nke a makwaara dị ka ụdị ala. Usoro nchịkọta ahụ yiri usoro ọkara olulu. Jiri okpukpu helix okpukpu abuo n'oge nkpatu iji mee ka ihe ndi ozo na ikuku.
Akwa okpomọkụ anaerobic composting.
Igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ bụ nnukwu ụzọ na-adịghị njọ iji kpofu ahihia, ọkachasị nsị mmadụ. A na-egbu ihe ndị na-emerụ ahụ dịka nje, àkwá na ahịhịa na ahịhịa na ahịhịa mgbe ọgwụgwọ dị elu dị elu. High okpomọkụ anaerobic composting bụ 2 ụzọ, ewepụghị kpokọtara ụdị na ọkara olulu ụdị. Usoro nke composting bụ otu ihe ahụ dị ka nke compost nkịtị. Otú ọ dị, iji mee ka nkwarụ ahịhịa ahịhịa pụta, nnukwu compost kwesịrị ịgbakwunye nnukwu ikuku cellulose decomposition, ma melite akụrụngwa kpo oku. Ekwesiri ime mgbochi mgbochi na ebe oyi. Igwe na-ekpo ọkụ dị elu na-agafe n'ọtụtụ nkebi: okpomọkụ-elu-jụrụ-decomposition. A ga-ebibi ihe ndị na-emerụ ahụ na okpomọkụ dị elu. Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị nwere simenti ma ọ bụ mpaghara pụrụ iche composting.
Isi mgwa: nitrogen.
Sub-components: site, potassium, ígwè.
Tumadi eji nitrogen fatịlaịza, ala ịta, adịghị mfe ime ka emebi mgbọrọgwụ usoro. Ọ bụghị adabara oké eji n'oge okooko pụta oge. N'ihi na okooko osisi na mkpụrụ osisi chọrọ ọtụtụ site, potassium, sọlfọ.
Ngwaọrụ maka fatịlaịza organic emere n'ụlọ.
Anyị na-akwado ịhọrọ ụdị ndị a dị ka akụrụngwa maka fatịlaịza a na-eme n'ụlọ.
1. Kwuo akụrụngwa
N’ọtụtụ nnukwu obodo ndị dị na United States, ndị ọchịchị na-akwụ ndị ọrụ na-ewekọta ahịhịa akwụkwọ ndụ akwụ ụgwọ. Mgbe o tozuru oke, a na-eresị ya ndị ọrụ ugbo na ego dị ala. Ma ọ bụrụ na ọ bụ na ogbe, ọ kacha mma ka onye ọ bụla oyi akwa nke deciduous epupụta na-erughị 5-10 cm oké, layered deciduous epupụta na ala mkpuchi ọkpụrụkpụ nke ihe karịrị 40 cm. A ghaghị ikpuchi oge n'etiti akwụkwọ dị iche iche dị iche iche dị ka ala, nke nwere ike iburu ihe dị ka ọnwa 6 ruo 12 iji mebie. Mee ka ala ahụ dị mmiri mmiri, mana etinyela ya mmiri ka ọ ghara igbochi nri na-edozi ala.
Ọ bụrụ na ejiri mkpụrụ osisi rere ure, mkpụrụ, peels, ifuru, wdg, ire ere nwere ike iwe ogologo oge. Site, potassium na sọlfọ ka elu.
Achịcha agwa, bean curd, wdg
Dabere na ọnọdụ mmebi, ịkọpụta ọgwụ na-ewe ọ dịkarịa ala ọnwa 3 ruo 6 ka ọ chachaa. Bestzọ kachasị mma iji meziwanye maturing bụ ịgbakwunye ụmụ nje. Otu ihe njiri mara ebe a na-ako ala bu na odighi asusu nile. Site, potassium na sọlfọ dị elu karịa nke compost akpọnwụ, ma dị ala karịa nke compost mkpụrụ osisi. A na-eme compost ozugbo site na ngwaahịa soy ma ọ bụ soy. Soybean na-ewe ogologo oge ka ọ ghara ịkọ nri n'ihi na ha nwere abụba dị elu. Maka ndị enyi na-eme abụba abụba, ọ ka nwere ike ịnụ isi otu afọ ma ọ bụ afọ site ugbu a. Ya mere, anyị na-atụ aro ka a na-esi nri nke soybean nke ọma, chachaa ya, ma tinye ya. O nwere ike belata oge impregnation.
2. Anụmanụ anụmanụ
Nsị nke ahịhịa ndụ dị ka atụrụ na ehi dị mma maka gbaa ụka na ịmịpụta fatịlaịza bio-organic. Ke adianade do, ọkụkọ nri na nduru ifuọ nduọk phosphorus ọdịnaya dị elu, bụkwa ezi nhọrọ.
Mara: Anụmanụ anụmanụ nke na-achịkwa ma na-emegharị na osisi nwere ike iji ya bụrụ akụrụngwa maka fatịlaịza organic. Agbanyeghị, n'ihi enweghị akụrụngwa nhazi n'ụlọ, anyị anaghị akwado iji anwụrụ mmadụ dị ka akụrụngwa iji mepụta fatịlaịza organic.
3. Ngwurugwu Organic fatịlaịza na-edozi ahụ
Mmekọahụ: Okike, ma nnukwu viscosity. Kwesịrị iji dị ka isi fatịlaịza, ọ bụghị naanị ya.
Mgbọrọgwụ agịga paini
Mgbe ọkpụrụkpụ deciduous karịrị 10-20cm, agịga pine nwere ike iji dị ka akụrụngwa maka fatịlaịza organic. Agbanyeghị, ịnweghị ike iji ya.
Osisi nwere ọdịnaya resin dị ala, dịka ịda ada nku nku, nwere mmetụta ka mma.
Fatịlaịza dị irè karị. Agbanyeghị, enweghị ike iji ya mee ihe ozugbo ma enwere ike ịgwakọta ya na ihe ndị ọzọ dị na mbara igwe.
Ihe kpatara na ihe eji akpukpo aru gha gha ere ya kpamkpam.
Mbibi nke ihe ndị na-eme ka ihe na-eduga ná mgbanwe abụọ bụ isi site na ọrụ microbial: mmebi nke ihe na-eme ka nri fatịlaịza dị irè. N'aka nke ọzọ, a na-eme ka ihe ndị e kere eke dị nro dị nro site na nke siri ike ruo nro, a na-agbanwekwa ọdịdị ya site na-enweghị isi na edo. Na nhazi, ọ na-egbu mkpuru ahihia, nje na ọtụtụ àkwá. Yabụ, ọ ga-adaba n'ihe chọrọ maka nrụpụta ọrụ ugbo.